Gainsight - ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းပလက်ဖောင်း Martech Zone
ainsရာဝတီ စျေးကွက်သမားများအတွက် 360 °ဖောက်သည်အမြင်ရရှိရန်နှင့်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏စွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးအဖွဲ့အစည်းအနှံ့ရှိအခြားဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုရှိသူများနှင့်ပူးပေါင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသော၎င်း၏ဖောက်သည်အောင်မြင်သူစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း၏ Spring Release ကိုစတင်ခဲ့သည်။
ကွဲပြားသောဌာနများဖြစ်သောအရောင်း မှစ၍ ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းများရှိသည့်စျေးကွက်တွင်စျေးဝယ်သူများသည်ဖောက်သည်များ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအချက်အလက်များဖြင့်စိန်ခေါ်ခံရသော်လည်း ၀ ယ်ယူသူများ၏ပျော်ရွှင်မှုနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမည်။ Gainsight ကဘယ်လိုကူညီသလဲဆိုတာဒီမှာ။
မွေးစားခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု module တစ်ခု ကုန်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှု၊ မွေးစားခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှုဆိုင်ရာမက်ထရစ်များကိုတိုင်းတာရန်နှင့်လုပ်ငန်းကို ဖြတ်၍ ဖောက်သည်များထံမှလုပ်ငန်းခွင်စီးဆင်းမှုကိုတိုင်းတာရန်အတွက်ဝင်ငွေရရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည်။
တုံ့ပြန်ချက်စီမံခန့်ခွဲမှု module ၀ င်ငွေရရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၀ င်ငွေ၏စစ်တမ်းကောက်ယူမှုမှတစ်ဆင့် ၀ င်ငွေ၏ကျန်းမာရေးကိုတိုင်းတာနိုင်ပြီးစစ်တမ်းကောက်ယူမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်သည် Salesforce.com.
တစ်သက်တာအခွန်စီမံခန့်ခွဲမှု module ထပ်ခါတလဲလဲဝင်ငွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိကျစွာ churn တိုင်းတာနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ခြုံငုံဝင်ငွေတိုးတက်မှုနှင့်ဖောက်သည်တစ်သက်တာတန်ဖိုးအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
retention စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်း တိုက်ရိုက် ၀ ယ်ယူသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ယူသူများကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုစံ သတ်မှတ်၍ အလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Gainsight သည်ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုကိုသက်ဆိုင်သူများက ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏သက်တမ်းစက်ဝန်းကိုဘက်စုံအမြင်ဖြင့်ကြည့်သည်။ Gainsight ၏စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအသစ်များသည်ကုမ္ပဏီများအားသူတို့၏အကြီးမားဆုံးနှင့်ဗျူဟာမြောက်သောဖောက်သည်များအားတန်ဖိုးထားရန်ကူညီသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၀ ယ်ယူသူများနှင့်ပတ်သက်သည့်လက်ရှိအချက်အလက်များကိုလက်ဖ ၀ ါးနှင့်စပွန်ဆာထွက်ခွာခြင်းများရှေ့တွင်ရှိနေခြင်းဖြင့်အပိုသိုလှောင်ခြင်းနှင့် ၀ င်ငွေတိုးခြင်းများကိုမောင်းနှင်သည်။
Tags: မွေးစားခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလွန်အမင်းဖောက်သည် retentionဖောက်သည်အောင်မြင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖောက်သည်အောင်မြင်မှုတုံ့ပြန်ချက်စီမံခန့်ခွဲမှုainsကြီးထွားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုတစ်သက်တာအခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုretention စီမံခန့်ခွဲမှုရောင်းသူ
မတ်လ 24, 2014 မှာ 8: 13 AM
အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်များ! သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. တကယ်ပဲဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ post ပါ။ ငါတို့နှင့်အတူမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။